Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya oo geeriyoodey | KEYDMEDIA ONLINE
Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya oo geeriyoodey
Waxa uu mudooyinkii dambe ku xanuunsanaa magaaladda Hargeysa, ee Caasimadda Maamulka Somaliland. Madaxda dalka ayaa tacsi ka diray geeridiisa.
HARGEYSA, Soomaaliya - Cumar Carte Qaalib, oo mar soo noqday Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa Maanta ku geeriyoodey Hargeysa, ee xarunta Maamulka Somaliland.
Marxuumka ayaa mudooyinkii dambe ayaa sariir jiif, isagoo la il-darnaa xanuun aan la sheegin, kaasoo noqday sababta geeridiisa.
Waxuu ku dhintay da'da 90-ka, waxaana lagu wadaa in lagu aaso Hargesa, halkaasoo dhawaan uu tagey wiilkiisa Maxamed Cumar Carte oo Ra'iisul Wasaare ku xigeen iyo Xildhibaan kasoo noqday dowladda Federaalka Soomaaliya.
Intii u dhaxaysay 1969 iyo 1977, AUN Cumar Carte ayaa soo noqday Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya nidaamkii kaligii-taliska uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre.
Siyaad Barre ayaa xilka Wasiirka Arrimaha Dibadda ka qaadey 1982, kadibna xabsi ayaa la dhigay, iyadoo markii uu ku jiray 7 sano lagu xukumay dil toogasho ah sanadkii 1989, isagoo lagu eedeeyay qiyaanno qaran.
Waxay isaga iyo kaligii-taliyaha isku khilaafeen taageeridda Soomaalida gobonimo-doonka u dagaalamaysay ee gobolka Ogaadeeniya ee dalka Itoobiya, oo illaa hadda aan xornimo helin.
Dowladdii KMG ee Cali Mahdi oo qeybo kamid ah Muqdisho ka jirtay xiligii dagaalka sokeeye ayuu Ra'iisul Wasaare kasoo noqday mudadii u dhaxaysay 1991ilaa 1993.
Warar 5 June 2021 12:05